युगसम्बाद साप्ताहिक - संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी
संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिने प्रयास जारी
Tuesday, 06.14.2016, 12:30pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था झनै तरल बन्दैगएको छ । नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था नै स्थापित हुन नदिन विगतमा गरिएका प्रयासहरू अझै पनि गतिमान छन् र मुलुकभित्र र बाहिरबाट खडा गरिएका अवरोधहरूको अन्त्य सहज छैन । संविधान जारी गर्दा प्रकारान्तरले एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा नै सहकार्यको अभाव छ र आन्तरिक दूरी विस्तारित छ । संशोधन र पुनर्लेखनको मागको घनचक्करमा परिसकेको संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने सवाल स्वतः उठिरहेको छ भने एउटा ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’काबारे समेत महिनौं सहमति नजुट्नु र प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र नियुक्त घोषित राजदूतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया नै अवरुद्ध भैरहेको स्थितिले एकातिर संविधानको कार्यान्वयनका कथित पक्षधर दलहरूभित्रैको बेमेल र अन्यमनष्कता प्रदर्शित गरिरहेको छ भने ‘मधेश आन्दोलन’ र त्यसमा मिस्सिन आइपुगेका दुई दर्जनभन्दा बढी ससाना दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूको किनारा नलागेसम्म संविधानले गति लिननसक्ने निश्चित नै छ । २०७२को साउन ३० गते सु भएको ‘मधेश आन्दोलन’ले एक वर्षको नेटो काट्न अब धेरै समय पनि छैन । पटक पटक भएका वार्ताका आव्हान, कतिपय चरणका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता र निष्कर्षविहीन स्थितिको निरन्तरताले यथास्थितिमा सहमतिपूर्ण राजनीतिक निकासको सम्भावना कत्ति पनि इङ्गित छैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रयोगको सार्थकता नै स्थापित हुन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न विद्यमान परिस्थितिले नै खडा गराइरहेको छ ।
नेपालमा निश्चित कार्यावधि तोकिएको पूर्णकालीन सरकार अकल्पनीय बन्दैगएको छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान संवैधानिक पद्धतिको विकासतिर भन्दा सधैं सत्ताकै लालशातिर केन्द्रित रहेकाले सरकारको भविष्य सधैं अनिश्चित छ । अहिलेकै सरकारको कुरा गर्ने हो भने यो सरकार ढाल्न केही समय अघि गरिएको प्रयास विफल भए पनि त्यो जारी नै छ । कतै राष्ट्रिय सरकारका त कतै सहमतीय सरकारका आवाजहरू घन्किइरहेका छन् । सत्ता प्रत्यावर्तनका लागि कांग्रेसभित्र भैरहेको छटपटी, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले आफ्नै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन पहल भैरहेको भनी गरेको खुलाशा र अहिलेकै सरकारलाई कांग्रेसको सहभागितासहित सहमतीय बनाउन एमालेभित्रबाट भैरहेको कसरत जस्ता कुराले वर्तमान सरकारको आयु छोटिएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसैबीचमा गत २७ गते बिहिवार ’विप्लब’ माओवादीले गरेको नेपाल बन्द र त्यसले देशव्यापी रुपमा पारेको असर पनि उत्तिकै राजनीतिक चासोको विषय बन्नपुगेको छ । समग्रतामा देशको परिस्थिति नियालेर हेर्दा राजनीतिक स्थायित्व , विधिको शासनको प्रत्याभूति र आर्थिक विकास एवं समृद्धिका सपनाहरू तुहिँदैजाने अनपेक्षित संकेतहरू मडारिइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा देशले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने पूर्वानुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।
माओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहु प्रचारित ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ अब नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा घोषित भएको छ । देशका विभिन्न भागबाट कार्यकर्ता बटुली प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमेतको उपस्थितिमा सामूहिक सपथका साथ घोषणा गरिएको यो पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी पनि गरेको छ । ‘अबको निकास आर्थिक विकास’को मूल नारा र ‘सुशासन, सदाचार, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक–समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समुन्नत समाजवाद’को आकर्षक नारा अगाडि सारी व्यापक प्रचार र तामझामकासाथ घोषित भएको यो दलले पुराना पार्टीहरूको उपादेयता समाप्त भएको र ती दलमाथि जनताको समर्थन र विश्वास पनि नरहेको जिकिर गर्दै ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ मात्र अबको विकल्प रहेको धुमधाम प्रचार भैरहेको छ ।
उद्घाटन सत्रपछि हिजो र आज भैरहेको खुला छलफलले यो नयाँ दलको कार्यदिशा कस्तो निर्धारण गर्छ भन्नेतिर आम जिज्ञाशा बढिरहेको छ । यतिखेर राजनीतिक गैरराजनीतिक हरेक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिबारे व्यापक चर्चा र कुतुहलता जागृत भए पनि यो पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने र अहिले हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको राजनीतिक विकृति, भागबण्डाको कुसंस्कार र विधिविहीनताको अवस्थालाई हटाउने गरी सत्तावृत्तमा घुमिरहेका प्रमुख दलहरूलाई विस्थापित गर्ने क्षमताप्रति भने कसैले पनि विश्वास गरेका छैनन् । भारतवादी छविको पगरी गुथेका र प्रधानमन्त्री भएर समेत शासकीय शैली देखाइसकेका डा. भट्टराई स्वचालितभन्दा कतैबाट सञ्चालित व्यक्तिका रुपमा रहेको चर्चा अहिले पनि उत्तिकै व्यापक छ । भारत पीडित नेपालको वर्तमान अवस्था, भारतप्रतिको डा.भट्टराईको अमूर्त धारणा र माओवादी लगायतका नयाँ संविधान पक्षधर दलहरूलाई कमजोर बनाउन डा. भट्टराईलाई अगाडि सारिएको हुनसक्ने चर्चा जस्ता कुराले पनि ‘नयाँ शक्ति नेपाल’का सामु ठूलो राजनीतिक चुनौती खडा छ ।